IGeofumadas: Uqikelelo luka-2010: Isoftware yeGIS-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Egeomates: 2010 Iziprofeto: GIS Software
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskCadcorpGoogle umhlaba / imephuGvSIGGIS asiboniseMicrostation-Bentleyegeomates MyqgisUDig
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlulileyo, ekutshiseni kwekhofi yentombazana umamazala esenzayo hallucinoma malunga neendlela ezihlelwe ngo-2010 kwindawo ye-Intanethi. Kwimeko yendalo esingqongileyo, imeko imile ngakumbi (ungathethi), into eninzi sele isetyenziswe kwixesha eliphakathi ngeemveliso ezinkulu, kodwa kungabi nkunkuma yekhofu yeli hora kunye nesandulela sokuphela konyaka, apha iya khona.
Isoftware yorhwebo (ayikhululekile): Zimbalwa iindaba. Ukuma phakathi kwe-ESRI, i-Bentley kunye ne-AutoDesk kubonakala ingafani, (ubuncinane kwimimandla yaseSpeyin) kwaye ngokubhekiselele kwintshisekelo kuye kwaba phantse iminyaka emihlanu ukususela kwinto entsha ye-xml kunye nokusebenzisana nemigangatho ye-OGC.
Kwakhona, kungakhathaliseki ukuba kuthethwa kangakanani, ukuphucula izixhobo zokuhlela i-vector kwi-GIS nokujonga kwi-CAD zihloko ezihamba ngendlela ende.
Ngoko, kwimeko AutoDesk, eyona nto esiza kuyibona yi-AutoCAD 2011, apho abantu sele besetyenzisiweyo kwi-tape yomxholo (iRibhoni) kwaye iqala ukonwabisa indlela obaluleke ngayo umsitho. Kungenzeka ukuba i-Civil 3D isinike isimanga, kodwa hayi kakhulu, ukukhula kwesoftware kunye nokulinganisela kokungaphazamisi abasebenzisi ngezinto ezininzi eziphambeneyo kuya kuhlala kunjalo. Kananjalo njengoko sisazi, i-AutoDesk ayenzi zindaba zigqithileyo kwiminyaka engaqhelekanga-ukukhululwa, kungekhona ikhalenda), ukuzenza kuphela, oku kuqinisekiswa njengoko siza kubona ifom. entsha ye-2011 xa sichaza i-AutoCAD 2012.
Xa kwenzeka bentley Siza kubona izinto ezininzi zobuqili, kodwa kuphela kwinqanaba lokutshaya. I-imodeli Okwangoku iyakuchaphazela kuphela iProise Wise kunye noMshicileli, nakwinqanaba lesindululo, kuba ngokoluvo lwam uBentley ufuna ukubuyisa ixabiso elongeziweyo kuKhetho kwaye asasaze iXFM, ecwangcisa kwixesha eliphakathi asizukuyibona ngo-2010. Mhlawumbi kulo nyaka masiqwalasele ukumiliselwa kokuqala kwe Bentley Cadastre nxaxheba kwi Uphefumulelwe, ewe, kufuneka ukubhema kwi-sublime, endiyitshilo elincinci elincinci elincinci elincinci ndikhethayo ukuba ndingabonakali.
Ngokuphathelele i-ESRI, andinayo ingcamango encinane into esinokuyilindela, I 9.4 version?, Andiyiqondi. Kwizixhobo ezikuloo nqanaba lokuma (kwintengiso nakubugebenga) kunzima ukuziva ukuba ungakhula ngakumbi, nangona abahlobo indawo evulekile unayo eludongeni Macondo.
Ewe GIS asibonise Ingabubudlova kakhulu, mhlawumbi phambi kukaJuni sizakubona izinto ezininzi. Kuncinci esikufundileyo kumyolelo kamantyi okhutshwa nguDimitry, ndibona ukunyanzelisa CUDA kwaye uqhubeke uchoxisa abantu kwiibitshi ze-64, yiloo nto abizayo speed. Usizi, kuba kwakudala ezi zinto zazifanele ukungena kwizivumelwano nee-greats, ubuncinci kunye neefom ze-dwg kunye ne-dgn ezisele zikwinqanaba lokucela eligwetyelwe kwisigqebelo sabo sokungahambelani phakathi kwenyani kunye nokungcamla okungalunganga.
Ukuba kukho into enokulindela kwi-Manifold kukuba aba bahlobo bayabhema oluhlaza, Ngekhe simangaliswe ukuba bongeze izinto ezininzi eziphambeneyo kwinto yokudlala, ethi ngokuthe ngcembe iphucule indawo yayo xa kuthelekiswa nezikhulu. Kodwa ngokoluvo lwam, siza kubona ukuphambana kwinqanaba ledatha kunye nokusebenzisana, kancinci kwinqanaba lokwakha kunye nokuhlelwa kwevector.
Umthombo ovulekileyo: Ukukhangela uzinzo. Akukho mntu uthe le ayisiyorhwebo, imigaqo ikhululekile kwaye ayikhululeki bayanele ukwahlula amaqela.
Ukuxabisa, kodwa kwimbono yam, i-gvSIG kunye neenguqu zayo 1.9 ziya kuqhubeka nokujongana nezimbungulu ezincinane kunye nokudala izivumelwano ezinika nokuzinza kunye nokubekwa. Eli gama libonakala linzima, ukuba sinika imakrofoni koonontlalontle, ndiyayithanda ngcono indlela ezichazwa ngayo yi-agronomists:
Eminye imithi ayibandakanyi ihlathi, kuba kufuneka kubekho indawo efanelekileyo kwaye ixabiso elithile liqwalaselwe lizinzileyo.
Xa kwenzeka GvSIGKuya kufuneka ilandele loo manyano iwusebenzisileyo ukuya eYurophu, embindini weSpain naseLatin America. Isizathu esisiseko: ngubani oza kunika iinguqulelo ezinjenge-Windows 7 ukuba Jikelele akanomdla wokuqhubeka Don Bill Gates, okanye amawaka eencasa ezikwiindawo zokugcina zeLinux. Kwaye oku, kuya kufuneka wenze uthungelwano lokugcina imeko yomdibaniso: izifundiswa, icandelo labucala, icandelo likarhulumente, elinokuthi likulungele xa sibona izinto kwi-gvSIG 2.0.
Kwimeko yendima edlalwa ngamanyathelo afana ne-OSGeo, IKHIWANE y Vula i-Consortium ye-GIS, kulindeleke ukuba baya kuqhubeka behambisa umgangatho eplasini, kunye nokumelela okukhulu komphakathi waseSpeyin kunye nokulinganisela phakathi ikhululekile kwaye ayikhululeki.
Amanye awakhululekile, mhlawumbi sineenguqulelo ezintsha GIS ephathekayo, Hlaziya amaqonga azinzileyo kwaye udibanise izikrini ezihamba phambili. Ngokoluvo lwam, siza kubona okutsha okuncinci kunye nabanye esele befikelele kwinqanaba lokuvuthwa, njenge I-GUM ye-Quantum, I-Grass ne-Udig; banengcinezelo engakumbi yokwakha ukuzinza kunokuba benze izinto ezintsha.
Andizikhupheli ngaphandle iindaba ezinomdla, okwenzekayo kukuba njengamanyathelo amancinci (hayi asimahla), amandla abo okwenza ingxolo anefuthe elincinci kwimeko ye-Hispanic. Ubuncinci, hayi njenge-gvSIG, yokuba isikhonkwane ngasinye esincinci thabatha i-jolota ukuza, isicwangciso esisebenzele ngakumbi ukulungelelaniswa kunokuba ubukhulu bebhanki; kunye nokwakha ukuzinza.
Ukuba ngaphandle kwam, ndiza kukhulula ezinye iinketho endizenzayo kwiSofthiwe a khululwe, Yintoni eyenzekayo kukuba gvSIG kufuneka ucinge abasebenzisi Abahlolokazi (i 95%) kwe 90,000 ngamayelenqe ubunzima le Java bume kade kunye nemigaqo-nkqubo eyahlukeneyo ukuthintela ukuba nokusebenzisa Linux kwaye romplón.
Kwakhona ezininzi Vula Umnikezi iya kuba malunga nento eyenzekayo ne-MySQL, ngoku Oracle umsi ogqibeleleyo phakathi kweminwe yesibini nowesithathu (kunye nesithathu). Inxalenye elungileyo, kuba uninzi lukulindela iindaba eziphambeneyo ezivela kwiPostgreSQL nakwiPostGIS.
Eminye imifuno: Yabona nga qi niseki I-Google Earth, ngombono wam malunga neminyaka emithathu ingaba namandla amaninzi ekwakheni nasekuhlaleni nqakraza iinkonzo ze-kml kunye ne-OGC. Kungenzeka ukuba inyaniso ukuyifaka la i-brace njengomgangatho kwi-Consortium ukuvelisa iziqhamo ekuphuhlisweni kwamalungu esithathu, oku kuya kwenza ukuba iGoogle imisele ekunikeni ixabiso elifanelekileyo (kubo), iqonga lokuhamba gorilopolic. (Okokugqibela kuqondwa kumxholo we-UTM 15 kunye neendawo ze-16 kunye nomphumo wale khofikazi
Yintoni enye endingayithethayo, oku kungummelwane weemveliso ezixhomekeke apha. Cadcorp, Imephu kunye ne-SuperGIS zivela kwelinye indawo, kwaye oku kugcina isithuba kwi-myopia yefama yasekuhlaleni.